Yakavanzika Gwara - Network maRadio
Sound of Angels ("Isu", "isu", kana "vedu") inoshanda ino webhusaiti uye chikuva (iyo "Sevhisi"). Iri peji rinokuzivisa iwe nezve edu marongero maererano neunganidzwa, kushandiswa, uye kuburitswa kwega zvemunhu data kana iwe uchishandisa yedu Sevhisi uye nesarudzo iwe yawakabatana neyedhata iyoyo.
Isu tinoshandisa yako data kupa uye nekuvandudza sevhisi. Nekushandisa sevhisi, iwe unobvuma kuunganidzwa uye kushandiswa kweruzivo zvinoenderana nemutemo uyu.
Ndeupi mhando yedhata inogadziriswa?
Tichiri kushandisa sevhisi yedu, tinokukumbira kuti utipe ruzivo rwunozivikanwa runogona kushandiswa kukutaurirana kana kukuziva ("Yega Dhata"). Ruzivo rwunozivikanwa runogona kusanganisira, asi haruna kungogumira kune:
Tinogona kushandisa yako Pachedu Dhata kuti tibate iwe netsamba, kushambadzira kana zvekusimudzira zvinhu uye nerumwe ruzivo rwunogona kufarira iwe. Unogona kusarudza kugamuchira chero, kana zvese, zveaya mameseji kubva kwatiri nekutevera chisina kuzvinyorera chinongedzo kana mirairo yakapihwa mune chero email yatinotumira.
Isu tinounganidza ruzivo sevhisi inowanikwa sei uye inoshandiswa ("Usage Dhata"). Iyi Yekushandisa Dhata inogona kusanganisira ruzivo senge komputa yako Internet Protocol kero (semuenzaniso IP kero), browser mhando, browser vhezheni, mapeji ebasa redu raunoshanyira, nguva uye zuva rekushanya kwako, nguva yakashandiswa pamapeji iwayo, yakasarudzika zvishandiso zvemidziyo uye imwe data rekuongorora.
Kutsvaga Cookies Datha
Isu tinoshandisa makuki uye akafanana ekuteedzera matekinoroji kuteedzera chiitiko pane yedu sevhisi uye nekubata rumwe ruzivo. Cookies mafaera ane diki dhata iyo inogona kusanganisira isingazivikanwe yakasarudzika chiziviso. Cookies inotumirwa kune yako browser kubva pawebhusaiti uye yakachengetwa pane chako chishandiso. Ekutevera matekinoroji anoshandiswa zvakare mabheoni, ma tag, uye zvinyorwa zvekutora nekutevera ruzivo uye nekuvandudza uye kuongorora sevhisi yedu. Unogona kuraira bhurawuza rako kuramba makuki ese kana kuratidza kana cookie iri kutumirwa. Nekudaro, kana iwe usingagamuchire makuki, unogona kusakwanisa kushandisa zvimwe zvikamu zvebasa redu.
Nechinangwa chei iyo data inounganidzwa?
Sound of Angels inoshandisa iyo data yakaunganidzwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana:
Kupa uye kuchengetedza basa redu
Kukubvumidza iwe kutora chikamu mune zvinofambidzana maficha ebasa redu kana iwe uchisarudza kuzviita
Kuunganidza kuongorora kana ruzivo rwakakosha kuti tikwanise kuvandudza sevhisi yedu
Kukupa iwe nhau, zvipo zvinokosha uye ruzivo rwezvemamwe nezvezvimwe zvinhu, mazvibatsiro uye zviitiko zvatinopa izvo zvakafanana nezvo zvawatenge watenga kana kubvunza pamusoro pacho kunze kwekuti wakasarudza kusagamuchira ruzivo rwakadaro
Isu tichachengeta yako Yega Dhata chete kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kuitira zvinangwa zvakatemwa mune ino Yakavanzika Policy. Isu tichachengeta uye toshandisa yako Yega Dhata kusvika padanho rakakodzera kutevedzera edu emutemo zvisungo (semuenzaniso, kana isu tichifanira kuchengetedza data rako kutevedzera inoshanda mitemo), kugadzirisa kusawirirana, uye kumisikidza zvibvumirano zvedu zvemutemo nemitemo.
Sound of Angels icha zvakare kuchengetedza Usage Dhata kune zvemukati kuongorora zvinangwa. Usage Data inowanzo chengetwa kwenguva pfupi, kunze kwekunge data iri richishandiswa kusimbisa kuchengetedzeka kana kugadzirisa mashandiro eSevhisi, kana isu tinosungirwa zviri pamutemo kuchengetedza iyi data kwenguva yakareba.
Tichatora nhanho dzese dzakakodzera zvine mutsindo kuona kuti data rako rakachengetedzwa zvakachengetedzeka uye zvinoenderana nemutemo wekuvanzika. Takazvipira kuchengetedza ruzivo rwako pachako kubva kune zvisiri pamutemo kushandiswa kana kuburitswa.
Kuzivisa kune Mapato Echitatu
Isu tinoshandisa yakasarudzika nhamba yevatendi vekunze vanopa sevhisi kune imwe yehunyanzvi dhata ongororo, kugadzirisa uye / kana kuchengetedza zvipiriso. Aya masevhisi evashandi anonyatsosarudzwa uye vanosangana nepamusoro kudzivirirwa kwedata uye ekuchengetedza matanho Isu tinongogovana ruzivo navo izvo zvinodikanwa kumasevhisi.
IfSound of Angels inobatanidzwa mukubatanidzwa, kutora kana kutengeswa kwemidziyo, yako Chako data inogona kutamiswa. Isu tichapa chiziviso usati wako wega dura wagamisirwa uye wova pasi peimwe Rutivi rwePamoyo.
Mune mamwe mamiriro,Sound of Angels unogona kudikanwa kuti udzivise yako Yoga Dha data kana ichidikanwa kuita kudaro nemutemo kana mukupindura kwezvikumbiro zvine mvumo nezviremera zveruzhinji (semuenzaniso dare kana gurukota rehurumende).
Sound of Angels inogona kuburitsa yako Yako Dhata mune yakanaka kutenda kudavira kuti kuita kwakadai kunokosha kune:
Kuchengetedza nekudzivirira kodzero kana zvivakwa zve Sound of Angels
Une kodzero yekuziviswa nezvePamoyo Pepa rakagadziriswaSound of Angels, kodzero yekugadzirisa / kururamisa, kudzima uye kurambidza kwekugadzirisa. Iwe zvakare une mvumo yekugamuchira yakarongeka, yakajairika uye muchina-inoverengwa fomati yePamunhu Dhata iwe yawakatipa kwatiri.
Tinogona chete kukuziva iwe kuburikidza neemail yako kero uye isu tinongogona kutevedzera chikumbiro chako uye nekupa ruzivo kana isu Tine Dunhu rako nezve iwe kuburikidza newe waita kusangana nesu zvakananga uye / kana iwe uchishandisa yedu saiti uye / kana sevhisi. Hatigone kupa, kugadzirisa kana kudzima chero data ratino chengetera vashandisi vedu kana vatengi.
Kuti ushandise chero kodzero dzakataurwa mune ino Yakavanzika Policy uye / kana muchiitiko chemibvunzo kana makomendi ane chekuita nekushandisa kwePamoyo Dhata unogona kubata timu yedu yekutsigira: soundofangels.lda@gmail.com.
Une mvumo yekubvisa mvumo chero nguva, pasina kukanganisa kutongwa kwekugadziriswa kwakaitwa usati wabvisa. Pese paunobvisa mvumo, unobvuma uye wobvuma kuti izvi zvinogona kukanganisa maitiro ehunhu uye / kana masevhisi. Iwe unoenderera uchibvuma izvoSound of Angels haizopihwa mutoro zvine chekuita nekumwe kurasikirwa uye / kana kukuvara kune yako Dhata kana ukasarudza kubvisa mvumo.
Uye zvakare, iwe une mvumo yekuisa chichemo kune vane masimba ekudzivirira dhata munzvimbo yako.
Isu tinoshandisa makambani evatatu uye vanhu kuti vafambise sevhisi yedu ("Vanopa Sevhisi"), kuti vape Sevhisi pachinzvimbo chedu, kuita mabasa ane chekuita neBasa kana kutibatsira mukuongorora mashandisiro eSevhisi yedu. Aya mapato echitatu anokwanisa kuwana yako Yemunhu Dhata chete kuti aite mabasa aya akamiririra isu uye anosungirwa kuti usazvizarure kana kuishandisa kune chero chimwe chinangwa.
Isu tinoshandisa vechitatu-bato Sevhisi Vanopa kuongorora uye kuongorora mashandisiro eSevhisi yedu.
Google Analytics ndeye webhu yekuongorora sevhisi yakapihwa neGoogle Inc. ("Google"). Google inoshandisa iyo Dhata yakaunganidzwa kuteedzera uye kuongorora mashandisiro eWebhusaiti ino, kugadzirira mishumo yezviitiko zvayo uye kuigovana nemamwe masevhisi eGoogle.
Facebook Ads Shanduko Yekutevera
Facebook Ads yekushandura yekutevera ndeye analytics sevhisi yakapihwa neFacebook, Inc. iyo inobatanidza data kubva ku Facebook kushambadzira network nezviito zvakaitwa paWebhusaiti ino.
Sound of Angels inoshandisa ekumisikidza masevhisi kushambadza kune wechitatu bato mawebhusaiti kwauri iwe mushure mekunge washanyira Sevhisi yedu. Isu nevatengesi vedu vechitatu-bato tinoshandisa makuki kuzivisa, kugadzirisa uye kushambadzira kushambadza zvinoenderana nekushanya kwawakaita kuSevhisi kwedu.
Google AdWords Kushambadzira (Google Inc.)
AdWords Remarketing ndeye kudzokorora uye hunhu hunongedzo sevhisi inopihwa neGoogle Inc.inobatanidza zviitiko zveWebhusaiti iyi neAdwords kushambadzira network uye iyo Doubleclick Cookie.
Twitter Kudzokorora (Twitter, Inc.) Zvimwe ''
Twitter Remarketing ndeye kudzokorora uye hunhu hunongedzo sevhisi yakapihwa neTwitter, Inc. iyo inobatanidza zviitiko zveWebhusaiti iyi ne Twitter kushambadzira network.
Facebook Tsika Vateereri (Facebook, Inc.)
Facebook Tsika Vateereri ndeyekudzokorora uye hunhu hwekutarisa sevhisi yakapihwa neFacebook, Inc. iyo inobatanidza zviitiko zveWebhusaiti iyi neiyo Facebook kushambadzira network.
Kubata uye kudzorera zvivakwa
BlueHost ibasa rekutambira rakapihwa neEndurance International Group
Hatingachengetedzi kana kutora zvido zvekadhi rako rekubhadhara. Mashoko iwayo anopiwa zvakananga kune vatatu vekubhadhara vatoriji avo vanoshandiswa kwemashoko enyu ega ari kutungamirirwa neChinyorwa Chavo Chekuita. Izvi zvinokonzera kubhadhara zvinoenderana nemitemo yakagadzirirwa neCPI-DSS sezvinotungamirirwa nePCI Security Standards Council, iyo inobatanidza kushandiswa kwezvikwata zvakadai seVisa, Mastercard, American Express uye Discover. PCI-DSS zvinoda kubatsira kuchengetedza zvakachengetedza kushandiswa kwekubhadhara mashoko.
Stripe ibasa rekubhadhara rinopihwa neStripe Inc.
PayPal ibasa rekubhadhara rinopihwa nePayPal Inc., iyo inobvumidza Vashandisi kubhadhara pamhepo.
Kukurukurirana uye kutsigirwa kwevatengi
Iyo Facebook Messenger Mutengi Chat iri sevhisi yekudyidzana neiyo Facebook Messenger mhenyu chat chat yakapihwa neFacebook, Inc.
Mushandisi dhatabhesi manejimendi
Mailchimp ndeye email kero manejimendi uye kutumira meseji sevhisi inopihwa neMailchimp.
Google reCAPTCHA ibasa rekuchengetedza reSAMP rinopihwa neGoogle Inc.
Woocommerce ndeyekutarisa-kunze sisitimu yekubata kubhadhara uye odha kugadzirisa.
Gravatar inoonekwa sevhisi sevhisi inopihwa neAutoattic Inc. iyo inobvumidza iyi Webhusaiti kuisa zvinyorwa zvemhando iyi pamapeji ayo.
YouTube vhidhiyo yezviratidziro yekuona sevhisi yakapihwa neGoogle Inc. iyo inobvumidza iyi Webhusaiti kuisa zvemukati zverudzi urwu pamapeji ayo
Facebook Yemagariro Widgets
Iyo Facebook Senge bhatani uye zvemagariro mawijeti mabasa anotendera kusangana neFacebook social network yakapihwa neFacebook, Inc.
Google + Yemagariro Widgets
Iyo Google+ + bhatani uye zvemagariro mawidget mabasa anobvumidza kudyidzana neGoogle + social network yakapihwa neGoogle Inc.
Twitter Yemagariro Widgets
Iyo Twitter Tweet bhatani uye yemagariro mawijeti mabasa anotendera kusangana neiyo Twitter social network yakapihwa ne Twitter, Inc.
LinkedIn Yemagariro Widgets
Iyo LinkedIn share bhatani uye yemagariro mawijeti masevhisi anotendera kusangana neiyo LinkedIn social network yakapihwa neLinkedIn
Yedu Sevhisi inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe masaiti asingashandiswe nesu. Ukabaya bato rechitatu bato, uchaendeswa kune iyo yechitatu webhusaiti. Isu tinokukurudzira zvikuru kuti utarise Zvemukati Zvayo nzvimbo yega yega saiti yaunoshanyira. Isu hatina masimba pamusoro uye hatitore mutoro wezviri mukati, zvakavanzika marongero kana maitiro enzvimbo dzese dzechitatu bato kana masevhisi.
Hatizivi kuti tinounganidza ruzivo rwemunhu oga kubva kune ani zvake pasi pezera re 13. Kana iwe uri mubereki kana mutariri uye iwe unoziva kuti Vana vako vakatipa isu neBy Data, tapota taura nesu. Kana tikazoziva kuti takaunganidza Data Data kubva kune vana pasina kuvimbiswa kwemvumo yevabereki, tinotora matanho ekubvisa mashoko iwayo kubva kumaseva edu.
Tinogona kugadzirisa yedu Yakavanzika Policy nguva nenguva. Isu tinokuzivisa iwe nezve chero shanduko nekutumira nyowani Yakavanzika Policy pane ino peji. Isu tinokuzivisa iwe kuburikidza neemail uye / kana chiziviso chakakurumbira pasevhisi yedu, shanduko isati yatanga kushanda uye kugadzirisa "zuva rinoshanda" kumusoro kweiyi Chakavanzika Policy. Iwe unorayirwa kuti uongorore iyi Yakavanzika Policy nguva nenguva kune chero shanduko. Shanduko kune ino Yakavanzika Policy inoshanda kana yaiswa pane ino peji.
Iwe unogona kuita izvi nekutaurirana nemutongi wedata (munhu kana sangano rakaronga mushandirapamwe wawakapinda). Iwe unogona zvakare kuwana iyo Account My kuona, kugadzirisa uye / kana kudzima ruzivo rwako pachako.